पाल्मु शेर्पाको म्युजिक भिडियो ‘दार ठेकीको’ सार्वजनिक
काठमाडाैं : पाल्मु शेर्पाको डेब्यु म्युजिक भिडियो ‘दार ठेकीको’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा उनलाई गायक प्रदीप लामाले स्वरमा साथ दिएकाे छ ।
शेर्पाको नादिङ भाकाको गीतमा जीवन बोम्जनको शब्द रहेको छ । गीतमा अमृत लामाको संगीत रहेको छ । जोगलाल लामाले यस गीतलाई संगीत संयोजन गरेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै उत्कृष्ट पर्यटकीयस्थलका रुपमा परिचित भोटेकोसी गाउँपालिकाको बगम र छगम गाउँमा भिडियोको छायांकन गरिएकाे छ । राज किङ वाइबाले कोरियोग्राफी गरेको उक्त भिडियोमा छोङ्गोपो रिञ्छेन शेर्पा र मिङ्गमर डोमा शेर्पाको अभिनय रहेकाे छ । रोशन फ्युबाको सम्पादन र निर्देशनमा भिडियो तयार पारिएको हो ।
स्वतन्त्र मन अर्थात प्रकाश पौडल
तिमी बिना बाच्न सक्ने मन्त्र चाहियो
मुटु सरी धडकीरहने यन्त्र चाहियो
यत्तिखेर नेपाली सांगीतिक बजारमा चर्चाको शिखरमा रहेको यस गीतका गीतकार हुन् डा. प्रकाश पौडेल । गीतलाई प्रसिद्ध गायक उदित नारायण झाले स्वर र संगीतकार राज सागरले संगीत दिएका छन् । गीतकार प्रकाश पौडेल नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका लागि पक्कै पनि नयाँ नाम हो तर उनका सृजनाले त्यसो भन्दैन ।
जम्माजम्मी दुई चार वटा गीत रेकर्ड गरेका पौडेललाई तिनै दुई चार वटा गीतले राम्रैस“ग स्थापित गराई छ । यस अघि यादका लहरहरु, फुलकुमारी लगायतका केहि गीतहरु सार्वजनिक गरेका पौडेलले ती गीतहरुबाट राम्रै प्रशंसा बटुलेका थिए ।
गायक उदित नारायण झाको आवाजमा रहेको स्वन्तत्र मनले उनलाई यत्तिखेर अर्कै चर्चाको शिखरमा पुयाएको छ । स्वर संगीत र शब्दको राम्रो तालमेल रहेको उक्त गीतले गीतकार पौडेललाई पनि बेग्लै किसिमको आनन्द दिलाएको रहेछ ।
सानै देखि गायक उदित नारायण झाको ठूलो प्रशंसक रहेका पौडेल उनै प्रिय गायकको स्वरमा आफनो सृजना गुन्जिदा खुसी नहुने कुरै भएन भन्दछन् । गीतको अडियो र भिडियो पक्षलाई लिएर कहि कतैबाट नकारात्मक टिप्पणी नआए पछि उनलाई नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा केही गर्ने हौसला मिलेको बताउँछन् ।
छिट्टै केही गीतहरु सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका गीतकार पौडेल यो गीत सृजना हुनुमा बेग्लै किसिमको अनुभव रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'यादका लहरहरु गीतको काम हुँदै गर्दा मलाई केहि शब्दहरुले जिस्काईरहेका थिए ति शब्दहरुलाई मैले डायरीमा टिपेको थिएँ । जब कोभिडको लहर विश्वभरी फैलियो मान्छेहरुमा एक किसिमको निराशा आंतक र भयले सबैलाई गाजेको थियो र मान्छेहरु आफुलाई कारागार भित्रको एक बन्दी कैदी जस्तै अनुभूति गरिरहेका थिए । कयौ कवि लेखकहरुले कवि माधव घिमिरेको कविता पिंजडाको सुँगा शैलीमा लेख कविता गीत प्रकाशित गरिरहेका थिए । मैले पनि त्यहि शैलीमा एउटा कविता लेखेको थिए पिँजडाको मान्छे । त्यो कविता लेखेको केहि दिन पछि मलाई अकै किसिमको अनुभव भयो । मान्छेहरु अहिले पो बरु यो समयमा स्वतन्त्र छन् । आफुले आफुलाई समय दिन पाएका छन् सबै जंजिरहरुबाट केही राहत पो पाएको छन् जस्तो लाग्यो । हिजोका दिनमा मान्छेहरु आफु आफुसंगै रमाउने आफैलाई समय दिने फुर्दै पाएको थिएनन । घर परिवार काम पैसा नाम आदिको तनाब र जंजिरबाट उम्किन सकिरहेको थिएन कमसेकम अहिले केही दिन भए पनि मान्छेहरु आफुसंग रमाउन पाएका छन् । सारा जंजिरहरुबाट केही समय मुक्तिको सास फेर्न पाएका छन् कसरी बन्दी भए भन्ने भावले मेरो मनलाई छायो । मैले मलाई मेरो मन स्वतन्त्र चाहियो भन्ने शब्द लेखे । त्यस पछि केही समय पहिला लेखेको शब्द सम्झिन पुगे मुटु सरी धडकीरहने यन्त्र चाहियो । त्यस पछि यिनै शब्दहरुसँग खेल्दै यो गीतलाई तयार पारे । गीत लेख्दै गर्दा गायक उदित नारायणको आवाजमा यो गीत रेकर्ड गर्ने सोच बनाए गीत त्यसै अनुरुप तयार पारे संगीतकार राज सागरले संगीत तयार पार्नु भयो उदित नारायण झाले गाउनु भयो गीत तयार भयो ।'
गीतकार प्रकाश पौडेल पेसाले चिकित्सक हुन् । उनका गीतहरुमा बेग्लै किसिमका भावहरु पाइन्छन् । थोरै काम गरेर धेरै चिनिएका गीतकारमा पर्दछन् उनी । उनी भन्छन्, 'कला साहित्य संगीत भनेको प्रयोग गर्ने थलो हो । जसले प्रयोग गर्न जान्दछ उसका सृजनाहरुलाई सबैले रुचाईदिन्छन् । सायद त्यही भएर होकी मेरा सृजनाहरुलाई सबैले रुचाई दिनु भएको । म मेरा सृजनाहरुमा प्रयोग गर्न रुचाउछु । त्यसो त गीतकार पौडेल गीत कविता सानै देखि लेख्ने गर्दथे । स्कूले जीवनमा उनका कविता गीत निबन्ध कथाहरुले कयौ पटक पुरस्कारहरु थापेका छन् । कुनै समय उनका कथा कविताहरुले नेपालका नाम चलेका पत्रपत्रिकामा राम्रै स्थान पाउदथे । त्यति खेरको साहित्यिक जोश बेग्लै थियो । नलेखी बस्नै नसक्ने केही न केही लेखी रहन पर्ने लेख्न मन लाग्ने ।'
त्यो बानी आज पनि उस्तै रहेको गीतकार पौडेल बताउँछन् । 'गीत कविता लेख्ने प्रेरणा उनलाई कसैको कथा कविता पढेर भन्दा पनि गीत संगीत सुनेर मिलेको रहेको रहेछ । गीत संगीतको म ठूलो शुभचिन्तक हुँ । त्यसबेला रेडियोमा बज्ने गीतहरु मेरा प्रेरणाका श्रोत हुन् । तिनै गीत संगीतले मलाई लेख्ने प्रेरणा दिएका हुन्,' उनी भन्दछन् ।
उनलाई मन पर्ने कवि साहित्यकारहरुमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, भूपि शेरचन पारिजात,लगायतका कवि साहित्यकार हुन् । चिकित्सक पेसासंगै गीत संगीतमा निरन्तर लागिरहने उनको ईच्छा छ । थोरै काम गर्ने तर राम्रो सृजनाहरु सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखेका गीतकार पौडेल हेर्ने भन्दा सुन्ने गीतहरु बजारमा ल्याउने उदेश्यमा अडिग छन् । अहिलेको सांगितिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका बताउने यी गीतकार अहिलेको सांगीतिक बजारलाई यसरी चित्रण गर्दछन् ।
अहिले पनि राम्रा सुन्न लायकका सृजनाहरु बजारमा आइरहेका छन् । दर्शक श्रोताहरुले रुचाइरहेका पनि छन् । तर केही व्यावसायिक ढंगले काम गर्नेहरुले केही सस्ता खालका गीतहरु ल्याइरहेका छन् । 'तर मेरो बुझाईमा राम्रो गीत संगीतको बजार जहिले पनि रहिरहन्छ । हामीले सस्ता भन्दा राम्रामा बढी ध्यान दियौ भने नेपाली गीत संगीतको अहिलेको यो अवस्था धेरै लामो समय टिक्दैन । मेरो उद्देश्य नेपाली गीत संगीतमा राम्रा सृजना मार्फत नेपाली सागितिक क्षेत्रको गरिमालाई माथि लैजानुमा केन्द्रित छ अहिले त्यसैमा लागिरहेको छु,' उनी भन्छन् ।
सबै प्रकारका गीतहरु लेख्न रुचाउने गीतकार पौडल सबै प्रकारका सृजनाहरु लेख्न रुचाउछन । भर्खरै सार्वजनिक भएको गीत स्वतन्त्र मनको प्रचार प्रसार व्यस्त रहेका यी गीतकार स्वतन्त्र मनबाट निकै उत्साहित छन् । छिट्टै उनका केही गीतहरु सावर्जनिकको क्रममा रहेको बताउने गीतकार पौडेलका केही कविता निवन्ध संग्रह प्रकाशनको क्रममा समेत रहेका छन् । आफुलाई प्रयोगवादी गीतकार भन्न रुचाउने गीतकार पौडेल नेपाली गीत संगीतबाट कुनै पनि अवस्थामा अलग नहुने बताउँछन् ।
काठमाडाैं : गायक विरेन रसाइलीको स्वर रहेको ‘तिम्रो याद’ बोलको म्युजिक भिडिय सार्वजनिक भएको छ ।
विजय अधिकारीको संगीत रहेको उक्त गीतको रचना दिलीप घिमिरेले गरेको हो । गीतलाई देवेन्द्र नेवाले संगीत संयोजन गरेका छन् । म्युजिक भिडियोमा जीवन भट्टराई, अञ्जना दुवाडी र अमिषा सुवेदीको अभिनय रहेकाे छ ।
प्रकाश धितालको निर्देशनमा बनेको भिडियाे ओएसआर डिजिटलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
काठमाडाैं : सामाजिक सन्देश बोकेको समलिङ्गी प्रेम सम्बन्ध, विवाह अनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोणलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको म्युजिक भिडियो ‘भतभती पोल्छ’ सार्वजनिक भएको छ ।
गीतमा युवा पुस्ताकी चर्चित गायिका रचना रिमालको सुमधुर स्वर सुन्न सकिन्छ । गीतमा अमेरिकामा बस्दै आएका गीतकार नारायण रसाइलीको शब्द रहेकाे छ । दीप घतानीले संगीतवद्ध गरेको गीतलाई सञ्जीव बराइलीले संगीत संयोजन गरेकाे हो ।
भिडियोमा पल शाह र प्रियाना आचार्यको जीवन्त अभिनय हेर्न सकिन्छ । बुद्ध थापाले छायांकन गरेको भिडियोलाई विकास धमलाले सम्पादन गरेकाे हो । तारा लोहनी रसाइली निर्मात्री रहेकी भिडियोलाई निकेश खड्काको निर्देशनमा तयार पारिएको हो । भिडियो गीतकार रसाइलीको च्यानल ‘नारायण रसाइली अफिसिएल’मार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ ।
एकसाथ ७ वटा गीत ल्याउदै रामप्रसाद खनाल
काठमाडौं : लोकगायक रामप्रसाद खनालले एकैसाथ ७ वटा गीत ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय अमेरिका रहँदै आएका खनाल पारिवारिक कामले केही अगाडि नेपाल आएका थिए । हरेक पटक नेपाल आउँदा नयाँ गीत संगीत र पुस्तक सार्वजनिक गर्ने खनालले हालै ‘माटोको दुखाई’ नामक कविता संग्रह समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
खनालले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका ७ गीतमा लोकगीत, लोक दोहोरी, भजन, आधुनिक, लोक आधुनिक, सेन्टिमेन्टल, सामाजिकदेखि गजलसम्मका फरक–फरक बिधा छन् । ती सबै गीतको रेकर्ड सकिएको छ । जसमध्ये ४ गीतको म्युजिक भिडियो छायांकन समेत भएको र तीन गीतको बाँकी रहेको खनालले बताए ।
बढ्दै गइरहेको कोरोनाका कारण बाँकी गीतको म्युजिक भिडियो छायांकन सम्भव हुन नसकेको खनालले बताए । खनालले ल्याउन लागेका ७ गीतमध्ये पहिलो भजन, हे कृष्ण हे राम गीत तथा गजलहरु, बग्ने पानीले, मेरो दिल चोरिन् च्यान्टी नानीले, एउटा ढुकुर उडिगयो, यस्तै छ यहाँको चलन, बाँकी छ हेर, फूल फुलेझैं लगाएत रहेको छ ।
लोकदोहोरी गीत अलि पृथक रहेको उनको भनाई रहेको छ । म्युजिक भिडियो छायाङ्कन भएको गीतहरू भने २ देखि ४ हप्ताको अन्तरमा सबै सार्वजनिक गर्ने खनालले बताए ।
सिर्जुको नजरले हान्यो नायक आर्यन सिग्देल र आकाश श्रेष्ठलाई (भिडियोसहित)
दोहा, कतार : गायिका तथा सङ्गीतकार सिर्जु अधिकारीले नेपाली चलचित्र नगरीका दुई चकलेटी नायक आर्यन सिग्देल र आकाश श्रेष्ठलाई एकै फ्रेममा समेटेकी छन् । ”नजरैले हानेर” नामक म्युजिक भिडियोमार्फत नायकद्वयलाई अधिकारीले एकै फ्रेममा समेटेकी हुन् ।
कोरोना कहरबीच पनि फिल्मी जगतका दिग्गज कलाकार तथा निर्देशकको साथ लिएर ठुलै जोखिम मोल्दै गायिकाले गीत सार्वजनिक गरेकी छन् । नजरैले हानेर नामको म्युजिक भिडियोमा नायकद्वयलाई अधिकारी आफैंले साथ दिएकी छन् । प्रवीण बेडवाल र अधिकारीकै आवाजमा रहेको गीतको शब्द र सङ्गीत गायिका स्वयमको रहेको छ । मन पराएर प्रेम गर्ने भए तानेर पनि बिहे गर्न सक्नु पर्ने कथा गीतले बोलेको छ ।
चर्चित कोरियोग्राफर कविराज गहतराजले निर्देशन गरेको भिडियोलाई सौरभ लामाले खिचेका हुन् । सिर्जु अधिकारीको आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएको भिडियोको सम्पादन अर्जुन जिसीले गरेका हुन् ।
लक्ष्मण पोखरेलको संगीतमा ‘दिलदिल’
काठमाडौं : चर्चित तथा लोकप्रीय गायिका अन्जु पन्तको स्वर र संगीतकार लक्ष्मण पोखरेलको शब्द संगीतमा दिलदिल बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । एसियन म्युजिक कम्पनि मार्फत सार्वजनिक भएको गीतमा दिलिम समनले भिडियोलाई निर्देशन गरेका छन् ।
इलामको रमणीय स्थानहरुमा छायांकन गरिएको भिडियोमा जतिन ताम्राकार र मल्लीका राजोपाध्यायले अभिनय गरेका छन् । मनोज चौलागाईको संगीत संयोजन रहेको गीतमा किशोर थापाको मिक्सिङ र राजेश श्रेष्ठको रेकडिङ रहेको छ ।
हरेक प्रकारका श्रोताहरुले मनपराउने शैलीबाट संगीतकारले गीतलाई तयार पारेका छन् । अडियो र भिडियो दुवै उत्कृष्ट रहेको गीतबाट यस गीतका संगीतकार आशावादी रहेका छन् ।
गीतको भिडियोलाई निर्देशक दिलिप समनले सम्पादन गरेका छन भने छायांकान शेखरदेव घिमिरे रहेको छ । गीतमा नृत्य निर्देशन राम विकको रहेको छ । निशान मगरको व्यवस्थापनमा तयार पारिएको गीतबाट आशावादी रहेको एसियन म्युजिकका संचालक ईश्वर गुरुङ बताउँछन् ।
संगीतकार लक्ष्मण पोखरेलको गायक प्रमोद खरेलको स्वरमा रहेको गीत आसु दिएर गयौ केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो भने संगीतकार पोखरेलको छिट्टै नै बन्दीपुर, घामपानी घामपानी, सपनाहरु झस्काई दिन्छन् लगायतका केही गीतहरु सार्वजनिक हुँदै छन् ।
अंकितबाबु अधिकारीको ‘कफी क्रस’ बजारमा
काठमाडौं : गायक तथा संगीतकार अंकितबाबु अधिकारीको सांगीतिक सौगात ‘कफी क्रस’ सार्वजनिक भएको छ । प्रेमिल शैलीको उक्त गीतमा अधिकारीको स्वर, शब्द र संगीत समावेश छ ।
गीतलाई भारतको पश्चिम बंगालका उत्कृष्ट संगीतकार सुमित विश्वकर्माले संयोजन गरेको हो । कुनै क्याफेमा कफी पिउँदै गर्दा अर्को टेबलमा बसेको कसैले तपाईंको ध्यान खिचेको छ ? कफी जत्तिकै सुन्दर, मीठो अनि माया–लाग्दो ! साँच्चिकै यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ भने यो भिडियो पूरा हेर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
भिडियोमा एक युवकलाई कफी पिउँदै गर्दा अर्को टेबलमा बसेकी सुन्दरीले आकर्षित गरेको विषय देखाइएको छ । तिनै युवतीको क्रियाकलाप र हाउभाउ देखेर युवक दंग पर्छन् । उनीहरुबीचको आँखा जुधाई, हेराहेर र अन्य भाव–संवादलाई क्याफेको एक वेटरले नजिकैबाट नियालिरहेको हुन्छ । वेटर गीतमा कहिले हास्ने त कहिले आँखा तर्ने गर्दा गीत अझै रोमाञ्चक बनेको छ । भिडियोमा गायक प्रताप दास र प्रियाना आचार्य ‘मुन्नी’को अभिनय रहेको छ ।
क्याफेमा वेटरको भूमिका अंकितबाबु आफैंले गरेका छन् । ‘यो गीत एक प्रयोग हो, मैले गर्दै आएका अन्य गीतभन्दा यो भिन्न छ, यसमा प्रयोग भएका शब्द तथा संगीतले युवा वर्गका कथा भने जस्तो लाग्छ’, उनले भने । अंकितबाबुका चर्चित गीतमा ‘के माया लाग्छ र’, ‘राम नाम’, ‘सम्झनालाई’, ‘याक्थुङ्मा कान्छी’ र ‘विनायो भाकैले’लगायत छन् ।
‘ए–सिरिज’ नामक च्यानल बाट सार्वजनिक गरिएको गीतको भिडियो निर्देशन नवीन भट्टले तथा छायांकन अनिश स्याङ्देनले गरेको हो । नवीनले यसअघि ‘मुना’, ‘वसन्त शिशिर’लगायतका भिडियो बनाएका थिए ।
‘कला क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले दीर्घकालिन सोच बनाउनुपर्छ’
रेडियोकर्मी हुँदै कलाकारितामा होमिएका अहिलेका ब्यस्त कलाकार अशोक धिताल २०५८ देखि निरन्तर यसै क्षेत्रमा सक्रिय छन् । लोकप्रिय हास्य टेलिचलचित्र ‘भद्रगोल’मा बाहुन डनको पात्रले परिचित धिताल हाल हप्ताको दुई पटक प्रसारण हुँदै आइरहेको पारिवारिक टेलि सिरियल ‘मेरो कथा’मा ब्यस्त छन् । दर्जनौं म्युजिक भिडियो र केही चलचित्रमा काम गरेका धिताल चलचित्र ‘मेरो कथा’ को पनि नायक हुन् । कलाकारितासँगै एपिवान टेलिभिनबाट प्रसारण हुने मौलिक रियालिटी शो ‘लोक स्टार’ का कार्यक्रम संचालक पनि हुन् उनी । चलचित्रमा हास्य अभिनयसँगै विविध विधामा धितालकोे दख्खल रहेपनि दर्शकहरुले उनलाई हास्य अभिनेताको रुपमा बढी रुचाएका छन् । प्रथम काँठे लोक दोहरी महोत्सव २०७६ सम्मान पत्र, नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७५ सममान पत्र, अर्को आँखा साप्ताहिक २०६९ युवा सिर्जनशील सम्मान लगायतका सम्मानहरुबाट सम्मानित भैसकेका कलाकार अशोक धितालले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ ?
टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँछु । अहिले प्रसारण भैरहेको सिरियल ‘मेरो कथा’मा पनि काम गरिरहेको छु । आफ्नै व्यवसाय पनि भएकोले यस्तै यस्तैमा ब्यस्त छु । नयाँ प्रोजेक्ट गर्ने भनेर तयारी हुँदै थियो फेरि लकडाउनको हल्लाले चिन्तित छु ।
पहिलो कोभिडको समय कसरी बिताउनु भयो ?
कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन, पहिलो चरणको संक्रमणबाट बिस्तारै पार हुँदै गएको अवस्थामा दोस्रो चरणको संक्रमण झन् ब्यापक बन्यो र राज्यले निषेधाज्ञा नै जारी गर्न बाध्य भयो । यस्तो अवस्थामा सुटिङ हुने कुरै भएन ।
कोभिडको कारण समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्नु भएन ?
म समाजसेवामा पनि पहिलेदेखि नै सक्रिय हुँदै आइरहेका कारण सहकर्मी साथीहरु, शुभेच्छुकहरु र प्रशंसकहरुसँग सहकार्य गरेर संक्रमणमा परेकालाई स्वास्थ्य समाग्री, अक्सिजनको व्यवस्थापन तथा न्यून आए भएका चलचित्र प्राविधिक मजदुर वर्ग र आवश्यक क्षेत्रमा आर्थिक, भौतिक र नैतिक समर्थन र सहयोग गर्ने काम भयो । फेरि संक्रमण बढ्दैछ यसपालि पनि समस्यामा परेकाहरुको मद्दतमा जुट्ने छु ।
तपाईं नायक हो कि खलनायक ?
‘जस्तोसुकै चरित्र र पात्र किन नहोस्, लेखकको कल्पना र निर्देशकको परिकल्पना अनुसार अभिनय क्षमता देखाउँदै आएको छु । कमेडी सिरियल ‘भद्रगोल’मा बाहुन डन भिलेन बनेर गरेको अभिनय सबैले रुचाउनु भएको छ । चलचित्रमा इमान्दार प्रहरीको भूमिकामा देखिँदा पनि दर्शकहरुले मन पराउनु भएको पाएको छु । नायक, खलनायक भन्दा पनि आफुलाई दिइएको भूमिकामा न्याय गर्न सक्नु नै बास्तविक कलाकार हो जस्तो लाग्छ । अभिनयको नवरसभित्र रहेर जस्तोसुकै चरित्रको अभिनय गर्न सक्छु भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
तपाईं त हास्य कलाकार पनि हो, दर्शकको रुचीमा के भिन्नता पाउनु हुन्छ ?
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो पछिल्लो समयमा रोमान्टिक, लभस्टारी, एक्सन भन्दा हास्य चलचित्रको दबदबा रहेको अवस्थामा गैरहास्य कलाकारहरू समेत हास्य चलचित्रमा आकर्षित भएका छन् । हास्य कलाकारलाई नै मुख्य नायक बनाएर चलचित्रहरू सफल र सुपरडुपर हिट भएको उदाहरण छन् । नेपाली दर्शकहरुको आ–आफ्नै रुची भएता पनि हास्य खुराक अलि बढी नै रुचाएको पाएको छु ।
यो क्षेत्रमा प्रवेश कहिले भयो ?
२०५८ सालदेखि म अभिनय क्षेत्रमा सक्रिय भएर लागेको हुँ । चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेशअघि म भित्रको अभिनय कुशलता निखार्ने काम विद्यालय तथा क्याम्पसका स्टेज शोहरुमा हुन्थे । तर व्यावसायिकरुपमै यस क्षेत्रमा लागेको ०५८ बाट नै हो । विभिन्न उतारचढाबका बावजुद पनि यो क्षेत्रमा अलग पहिचान बनाउन सकेकोमा खुशी लाग्छ ।
अहिले हामी कहाँ हास्य ब्यंग्य कलाकारहरुको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा हास्य ब्यंग्य अत्यधिक रुचाइने विषय हो । हास्य ब्यंग्य हाम्रो सभ्यता पनि हो । कसैको ब्यांग्यात्मक कसैको सम्वेदनात्मक आफ्नो आफ्नो तरिकाको प्रस्तुति हुने समाज हो हाम्रो । गाउँमा हुने मेला, जात्रा पर्वहरुमा पनि विशेष गरी हास्य हाउभाउ प्रस्तुत गर्ने ब्यक्ति सबैको प्रिय हुन्थ्यो । अन्य अभिनेता भन्दा हास्य अभिनय गर्ने अभिनेताहरुको आम्दानी र सामाजिक सम्मान नेपालमा अत्याधिक रहेको पाइन्छ ।
भने पछि आर्थिकरुपले पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
आफुले मिहेनत गरे अनुसार आर्थिकरुपले पनि म सन्तुष्ट छु ।
स्टेज कार्यक्रमहरुमा तपाईंको माग ?
कोभिड संक्रमण हुनु पहिले देश, विदेशमा हुने स्टेज कार्यक्रममा भ्याईनभ्याई हुन्थ्यो, यो बीचमा कुनै पनि स्टेज कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएको छैन । बिस्तारै वातावरण सहज हुने क्रममा छ । मेरो अभिनय रुचाउने दर्शकहरुको माग मेरो प्रस्तुति देश विदेशका स्टेजहरुमा पनि होस् भन्ने रहेको छ । आयोजकहरु पनि मेरो माग गर्नु हुन्छ । त्यसैले समय व्यवस्थापन गरेर स्टेज शोहरुमा पनि जान्छु ।
कला क्षेत्रको बिकासका लागि राज्यको तर्फबाट के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
कला क्षेत्र वा चलचित्र क्षेत्रले हजारौं ब्यक्तिलाई उसको सीप र क्षमताअनुसारको रोजगारी दिँदै आइरहेको छ । साथै राज्यलाई कर पनि तिर्दै आएको छ । त्यसैले यसको विकासका लागि सरकारले दीर्घकालिन कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । यसै क्षेत्रमा आफ्नो जीवन बिताएका कलाकार, प्राविधिकहरुको वृद्धावस्था निकै नाजुक हुने गरेको छ । जसका लागि आर्थिक सहयोग वा अनुदानको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । पेशामा सम्बद्ध कलाकर्मीरुको प्रोत्साहनका लागि प्रशिक्षणलगायत अवसरको सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘सम्पादनको मुख्य पक्ष यसको थिम बुझ्न जरुरी छ’
संगीता खत्री नेपाली कला क्षेत्रमा कला सम्पादकको रुपमा परिचित नाम हो । आफ्ना कार्यमार्फत ख्याति कमाउन सफल खत्रीले यो क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानस्वरुप विभिन्न मान सम्मान, पुरस्कार र अवार्ड प्राप्त गरेकी छिन् । चलचित्र, सिरियल र म्युजिक भिडियोमा उनले आफ्नो उत्कृष्टता प्रदर्शन गरेकी छिन् । उनले ‘दृष्टि’, ‘हाम्रो नेपाल’, ‘एकल महिला’, ‘धोका’, ‘नियत’, ‘जातभात’, ‘विमला’, ‘काजल’, ‘परदेशी’, ‘व्यथा’, ‘तीजको व्यथा’ जस्ता प्रस्तुतिमा आफ्नो क्रियशनमार्फत तारिफ बटुल्न सफल भएकी छिन् । आफ्नो हरेक काममा विशिष्टता प्रस्तुत गर्ने कोशिसमा रहेको बताउने संगीतासँग मध्यान्ह दैनिकका लागि प्रतिक्षा गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कला क्षेत्रमा यहाँको प्रवेश कसरी भयो ?
मेरो रुचीको क्षेत्र हो यो । बिस्तारै बुझ्दै र अध्ययन गर्दै यो क्षेत्रमा आएँ । म यस्तै सन् २००९ देखि यो क्षेत्रमा आएकी हूँ ।
अहिलेसम्म के कति काम गर्नुभयो ?
चलचित्र, सर्ट मुभी र म्युजिक भिडियोहरूमा काम गरें । म चलचित्र, सर्ट मुभी र म्युजिक भिडियोमा नै आफूलाई व्यस्त राख्दै आएकी छु । एक दर्जन जति भयो होला अहिलेसम्म आउँदा ।
कला क्षेत्रमा आउनका लागि के ले प्रेरित गर्‍यो यहाँलाई ?
मैले माथि पनि भनें मेरो रुचीको क्षेत्र हो यो । रुचीको क्षेत्र भएका हुनाले यो क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय कार्य गरौं भन्ने लागिरहन्थ्यो । पहिलादेखि मुभिहरू हेर्थें, कसरी बनाइन्छ भन्ने जिज्ञासा हुन्थ्यो ? पछि सिक्दै बुझ्दै जाँदा मैले योभन्दा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो र यो क्षेत्रमा तानिएँ ।
गाह्रो सजिलो के पाउनुभयो त यो क्षेत्रमा ?
हरेक क्षेत्रमा राम्रो प्रस्तुति दिनु भनेको जटिल काम नै हो भन्ने लाग्छ । फेरि तपाईंले कसरी लिनुहुन्छ आफ्नो कामलाई भन्ने हो । सामान्य त सबैले गर्ने गर्छन् केही सिकाइ पछि । त्यसमा विशिष्टता प्रस्तुत गर्नु आफैँमा चुनौती हो । म हरेक मेरा काममा विशिष्टता प्रस्तुत गर्ने कोशिसमा हुन्छु । हरेक काममा केही उल्लेखनीय प्रस्तुत गरौं भन्ने लाग्छ । सायद त्यही भएर नै होला भन्ने लाग्छ मेरा कार्यलाई मन पराइएको छ । मलाई पनि सुरु सुरुमा गाह्रो थियो, अहिले सहज छ । सिक्दै गएपछि सहज हुन्छ । गाह्रो त गाह्रो काम नै हो यो । कसरी अझै राम्रो गर्ने भन्ने हुन्छ हरेक प्रस्तुतिमा ।
आफ्ना प्रस्तुतिलाई दर्शकमाझ पु¥याउँदा केमा बढी फोकस हुन जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
मलाई के लाग्छ भने राम्रो कामका लागि नै फोकस हुनुपर्छ । समय दिएर काम गर्नुपर्छ । सर्टहरू मिलाउनु पर्छ । क्वालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ । कलरमा ध्यान दिनुपर्छ ।
कतिको च्यालेन्ज हुन्छ ?
राम्रो प्रस्तुतिका लागि यसमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा त्यतिकै च्यालेञ्ज रहन्छ ।
तपाईंको भविष्यको योजना ?
मैले यही क्षेत्रमा नै आफ्नो सपना र विपना एक गरेर अघि बढिरहेकी छु । यही क्षेत्रमा अझ उत्कृष्टता हासिल गर्ने योजना रहेको छ । अझ राम्रो गर्ने योजना छ । यही क्षेत्रमा विशेष पहिचान कायम कसरी गर्ने भनेर हरसमय तल्लिन रहन्छु । यो क्षेत्रबाटै मेरो आफ्नो पहिचान जुन स्थापित भएको छ त्यसलाई अझ व्यापक र विस्तारको योजनामा छु ।
भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
राम्रो छ नि । प्रोफेसनल भएर काम गर्नुप¥यो । बुझेर सिकेर आफूले राम्रो गर्छु भनेर लाग्दा राम्रो छ ।
यहाँले गरेका काम मध्ये आफैँलाई मन परेको काम ?
आफूले गरेका काम सबै राम्रा लाग्छन् । तर, जहिले पनि योभन्दा अझ राम्रो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ । सबै राम्रै लाग्छ मलाई त । तर ‘एकल महिला’को काम आफैँलाई राम्रो लागेको काम हो ।
सम्पादन गर्दा चाहिने मुख्य कुरा के बुझ्न जरुरी हुन्छ ?
मुख्य कुरा यसको थिम बुझ्न जरुरी छ ।
एउटा श्रव्य दृश्य सामग्री सम्पादनको कस्तो भूमिका रहन्छ ? के निर्देशक तथा छायाँकारले खिचेर ल्याएका दृश्यलाई काटने र जोड्ने काम मात्रै हो ?
तपाईंले भने जस्ते विलकुलै होइन । एकदमै होइन । निर्देशक तथा छायाँकारले खिचेर ल्याएका दृश्यलाई सिलसिलेवार कथामा ढाल्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी फिल्म सम्पादकको हुन्छ । अहिले फिल्मलाई कस्तो बनाउने भनेर निर्देशकहरूले सम्पादकसँग पनि सल्लाह लिने गरेका छन् । काट्ने र जोड्ने काम मात्रै सम्पादन होइन । फिल्मको स्क्रिप्टदेखि नै काम गर्न थालिएको छ ।
हामीकहाँ सम्पादन गर्नेहरूको अवस्था कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ?
अहिले फिल्म निर्माणको क्रम बढेसँगै प्राविधिकले पनि राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । सम्पादनको काम गर्दा आर्थिक रूपमा पनि सक्षम हुने अवस्था आएको छ । धेरै राम्रो छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणका कारण ठूलो पर्दाका चलचित्र कम बनेका भएपनि सर्ट भुमि, सिरियल, टेलिचलचित्र, हास्य सिरियल, म्युजिक भिडियामा तथा अन्य दृश्य सामग्रीमा राम्रा फिल्म सम्पादकहरू व्यस्त नै रहेको पाउँछु म ।